AMAQHOSHA AMNYAMA: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU EQINISEKILEYO - IINDABA
Uxinzelelo lokwenza uthelekiso lweMigca emhlophe apha alunakubekezeleka, ke ndiza kuyikhupha ...
Uxinzelelo lokwenza uthelekiso lwe-White Stripes apha alunakubekezeleleka, ke ndiza kuyikhupha ngokukhawuleza: I-Black Keys kunye ne-Stripes ngokuqinisekileyo ziya kubekwa kwiphepha elinye kwimbali enkulu ye-Rock, kodwa ukufana kwamaphepha ecaleni- nganye duo ngokungazenzisiyo, isiphithiphithi esihlaziya isithethe saseMelika ngesiphepho esincinci sokukhuhla ii-guitars kunye nezikhumba ezaphukileyo- abananto phantse ngokufanayo. Amaqhosha amnyama anokuba ziidudesi ezimhlophe ezivela eAkron, kodwa kubonakala ngathi zikufutshane emoyeni kwinto uMuddy Waters ngokwakhe awayenokuthi ayithathe 'njengeblues' kunalo naliphi na ibar-band yangaphakathi. Ikhonkco elinemigca kuphela ekubalulekeni kwayo, enyanisweni, kukuba icwecwe elidlulileyo lamaqhosha lalilungile, nalo.
Kunyaka ophelileyo Ukuza Okukhulu yazisa igaraji-grime kunye 'ne-white Hendrix' croon ye-Sonics kwi-strut engengcwele yeJunior Kimbrough yemigca yegita eyindumasi, ibadibanisa ngokutshica, ukutshiza, i-monster yeetoni ezingama-40. Abaphumeleleyo abanjengo 'Mphefumlo onzima' bakhuphe ibhallet yokuqala yeFordzilla ityumza iiBuick ezingagunyaziswanga, kwaye xa ibingaxakekanga ikhwelisa abakhweli, isanikezela ngombono woomatshini ababuthathaka phantsi kwentloko kunye nokusikeka komphefumlo okufana 'Ndiya kuba yiNdoda yakho'. Kunye Ukutyeba okuqinileyo , igitare ebikade inesisindo esikhulu ibonakalisile ukuba inzima, iyajiya, kwaye inencindi, idumba ukuya kumhlaba oshukumisa umhlaba, ngelahleko elibuhlungu lobuqhetseba obuncinci. Kodwa yile ndlela ngamanye amaxesha; akukho gumbi lobunewunewu obufana nokwahluka okungafaniyo kwithoni, okanye isingqi esiguqukayo xa ubaleka kwi-behemoth yokuphefumla umlilo.
Okwangoku, ginya ngokwaneleyo iiblues ezimhlophe ezishushu kwaye ufumana isilungulela; kunzima ungaphoswa Nyuka Ukuzivocavoca ukuhamba ngesantya esinjenge 'Ukubala' okanye 'Amehlo abo' emva kogqabhuko lweblues # 348 (kunye nokubala). Ngaphandle kobunqabileyo, u-Dan Auerbach usebenza ngokukhawuleza njengomntu ongenanto ozaliswe nge-samente, kunye noPatrick Carney's grooves ejikelezayo ibonakala icinezelekile, iqhutyelwa phambili kumxube. Kwakhona, amaqhosha agxampuza njengobundlobongela nangokomthetho njengangaphambili, kodwa baphantse bathabatheka. Iingoma ezinje 'ukuba uyandibona' kunye 'nokwenzakala njengam' ukuzama ukunciphisa Ukutyeba okuqinileyo 'umlilo wasendle ukutshisa nje okulawulwayo, kodwa nokuba amaqhosha azama ukuwudlala upholile kule albhamu, aqhubeka eshushu. Akukho nto iphambuka kude kakhulu kukunyibilika okunyibilikisiweyo komnikelo oqhelekileyo 'wobusuku bobusuku' okanye isiciko esithembekileyo se-Ubics se-Sonics '' Ngaba Uthando Luya Kuhamba '.
Hayi, kodwa ndihlekisa ngabani? Ukutyeba okuqinileyo inokuthi ijonge ekucinezeleni i-monolithic, kodwa ikwangumlinganiso olinganayo wokunyaniseka kunye nokuzinikela, iindudumo kunye nemibane, ubungangamsha kunye nomsindo ohamba ze. Jonga amandla engoma yomxholo, umntu ofayo, kunye nokuphelelwa lithemba! Umbindi ophakathi wahlula izulu nomhlaba, kwaye okwemizuzu embalwa, uyalela yonke ingqalelo yakho njengoko usoyika ubomi bakho; kukukhupha amadimoni, ikatharsisi. Kwaye iya isiba nkulu kwaye ibe freakier ukusuka apho, ityhalela kumkhosi wokulumkisa ofanayo 'noRow Row'; Njengenguqu eyenziwe lula, kodwa engenakuphikiswa ngokulinganayo eyandulelayo, ibluster elula iyothusa okomzuzwana. Xa iAuerbach ibhomboloza, 'Kuluhlu olunzima ukuzimela ngokwakho,' ukukhutshwa kuyamangalisa.
Kodwa ngokuqinisekileyo, amandla endibaniselwano yokuvula angqina ukuba akunakugcinwa ixesha elide. Nangona ukungqubana kwamanqindi kunye nokubaleka, ukunyuka / ukuwa kwe-soloing 'Yokukhulula' phantse kuphumelela ekugcineni i-pummeling drive ngaphaya kwayo yonke imida yonyamezelo lomntu, iphelela ekubeni yeyona nto isonwabisa kakhulu kwi-albhamu ngaphandle kwemfuneko yokuphumla. Umzimba ubambelela kolunye uqhushumbo emva kokuphinda uthandwe ziigwegwe ezimbi zika-Auerbach kwimizuzwana yokuvula, kwaye ufumana (nje kancinci) ngaphantsi koko, kodwa ukuphumla kwamkelekile. Ukususela ngelo xesha ukuya phambili, Ukutyeba okuqinileyo iqala ukubaleka kunye kancinci, nangona bekutshiwo ngaphambili, ingekuko ukungabikho kwamandla.
Iinkxalabo ezinxulumene nesidingo sokungathathi ntweni ngakumbi kunye neendidi zokuthintela iiKhi ezimnyama ngeli xesha, kodwa zihlala zingabalulekanga ngokubhekisele kuhlaselo lwazo lwe-muscular blues. Ngaphezulu kwalonto, ii-echoes ezincinci ze-'Cry Alone 'kunye ne-RL Burnside-as-channeled-thru-MC5 tangle of' Hold Me in Your Arms 'ziyincoma ngokungafaniyo, ivala i-albhamu ngokwahlukileyo ngokwahlukileyo. isandi kunokuba bebesibonisile. Konke kuxeliwe, iziphene zinxulumene nento i-duo esele izibonakalisile ukuba inakho ukuyenza Ukuza Okukhulu ; Ukutyeba okuqinileyo ayisiyonto yabo yokuqala, kodwa isengumbane wamandla, nditsho nokudlula kukhokho wayo kumboniso opheleleyo. Ubungangamsha beliwawa eliqhelekileyo njengoko kuqhele ukwenziwa kweli cwecwe kunzima ukuza kulo naliphi na igunya; ukuba oko kuthetha ukungahoyi iziphene ezimbalwa, kufanelekile.
mdala kangakanani tupac namhlanje
umoya ebumnyameni aretha franklin
ukuzinikezela 4 lil wayne
UFred da godson ufile
I-mill ethambileyo yemizila yedrake
Imfazwe yase-miguel kunye nokuzonwabisa